>၂၄ ပစ္စည်း – The Only Way To Go!
Posted on January 12, 2010 February 5, 2011 by barnay
အန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းဝေစေလိုခြင်းငှာ ရွတ်ဆောင်ကြပါကုန်
၂၄ ပစ္စည်းကို ဘယ်နေရာမှ မဆို ခရီးသွားလို့ကြုံကြုံပေါ့ အိပ်ခါနီး ရင် ရွတ်ဖတ်ဖို့အတွက် အစီအစဉ် က စနေအရပ်ကနေ(အနောက်တောင်အရပ်) စပြီး သုံးခုစီ ရွတ်သွားပါ ပြီးမှ အိပ်ပါ . ဒါဆို ရင် ကျရောက်မဲ့ အန္တရယ်များမကျရောက်ပဲ ကင်းရှင်းနိုင်ပါတယ်
နောက် အိမ်တစ်ဝိုင်းလုံးလုံချင်ရင် မတ်တတ်ရပ်ပြီးလှည့် ရွတ်ပါ . အိမ်တစ်အိမ်လုံး လုံချင်ရင် ထိုင်ပြီး လှည့် ရွတ်ပါ တစ်ကိုစာ လုံချင်ရင် အိပ်ယာထဲမှ ရွတ်ပါ တဲ့ .
မိတ်ဆွေများ ဘေးကင်းစေဖို့ ရွတ်ဖတ်ကြပါကုန်
>၈။ အနှစ် ရှိသော လူဖြစ်ရေးနှင့် ဘ၀တစ်ခုရပ်တည်မှု